समिति साइनअप Sign DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
के तपाई डचटाउनलाई बस्नको लागि उत्तम स्थान बनाउन चाहानुहुन्छ? हामी तपाईंको सहयोग प्रयोग गर्न सक्दछौं! तलको फारम भर्नको लागि एक मिनेट लिनुहोस् र हामीलाई तपाईंको रुचि के हो बताउनुहोस्। हामी तपाईंलाई बैठकहरू र अन्य स्वयम्सेवा अवसरहरूको बारेमा सूचित गर्नेछौं। समितिहरूमा अधिक जानकारीका लागि तल स्क्रोल गर्नुहोस्, वा फेला पार्नुहोस् यहाँ डचटाउन समितिको पूर्ण सिंहावलोकन.
डिजाइन आर्थिक जीवन्तता संगठन पदोन्नति कुन कमेटीहरुमा तपाईले रुचि राख्नु भएको छ जाँच गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि तल पढ्नुहोस्।
समितिको बारेमा बढी
डिजाईन कमेटीले छिमेकीको भौतिक तत्त्वहरूमा सुधारको लागि काम गर्दछ, जबकि समुदायको प्रामाणिक चरित्र र ठाउँको भावना सुरक्षित गर्दछ। हामी हाम्रा ऐतिहासिक भवनहरू र सार्वजनिक ठाउँहरू हेर्छौं र ती बहुमूल्य सम्पत्तिहरू सुधार गर्ने उपायहरू खोज्छौं।
प्रत्येक महिनाको पहिलो बिहिबारमा भेट्छ।
प्रत्येक महिनाको दोस्रो मंगलबारमा भेट्दछ।
प्रत्येक महिनाको दोस्रो बिहिबारमा भेट्छ।
प्रत्येक महिनाको तेस्रो मंगलबारमा भेट्दछ।
सुरक्षित, सफा, र हरियो
सेफ, क्लिन, र ग्रीन कमेटी सुन्दरता र रखरखाव, सुरक्षा, सामुदायिक न्याय सेवाहरू, र हरियो पहलमा छिमेकी सरोकारवालाहरूसँग काम गर्दछ। सुरक्षित, सफा, र हरियो डचटाउन मा सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण मुद्दाहरूको सामना गर्न रणनीतिहरू विकास गरेर धारणा र वास्तविकता सुधार गर्न रणनीतिहरूमा कार्य गर्दछ।
प्रत्येक महिनाको तेस्रो बिहीबारमा भेट्दछ।
निश्चित छैन तपाईको लागि के सही छ?
ठिकै छ! हुनसक्छ तपाईं निश्चित समितिमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ। वा सायद बैठकहरू तपाईको चीज होइनन्, र तपाई केवल सफाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्‍याउन चाहानुहुन्छ वा घटनाहरूको बारेमा शब्द प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईले जे गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईको सहयोग पाउँदा हामी खुशी छौं! हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी यो पत्ता लगाउँदछौं कि हामी कसरी डचटाउनलाई राम्रो बनाउन सँगै काम गर्न सक्दछौं।
डचटाउन STL.org समिति साइनअप